News - ရာဘာကြိတ်စက်များနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
အချိန်နှင့်မှန်ကန်သော anilox roller ကိုနေ့စဉ်ပြုပြင်ခြင်းသည်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်သည်။
1. အသစ်လိပ်ပြေး -in ကို
၎င်းသည်နောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါကအရေးကြီးသောအမိန့်များကိုစစ်ဆေးရန် roller အသစ်များကိုမသုံးပါနှင့်။ စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီ anilox လိပ်သည်သုတ်ခြင်း၊ ပိုလန်ခြင်းနှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းခြစ်ဆေးများ၏အသုံး ၀ င်မှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အသစ်လိပ်၏အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းလိင်လျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်။ စက်အသစ်ကိုစက်ပေါ်တွင်တင်သောအခါအချိန်တန်လျှင်ဂရုစိုက်ပါ။ လိုင်းများရှိပါကအချိန်ကိုရပ်တန့်ပြီးသုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေများတွင်အမှုန်များ၏မာကျောမှုသည် anilox roller ကို ၀ တ်ဆင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ သို့သော်အချို့သောသေးငယ်သည့်အမှုန်ငယ်များသည်ခြစ်ရာများကြောင့်သေးငယ်သောကြွေထည်ငယ်များထုတ်လုပ်ရန်ခြစ်ရာ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိကွက်နံရံကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုမသတ်မှတ်ပါ။ ခြစ်၏ဓါးအစွန်းမှာတစ် ဦး ထက်နည်း။ အဆိုင်းသည်မပြုပြင်နိုင်သော groove mark များကိုကြိတ်ရန်လုံလောက်ပြီးပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင် roller body ကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ဤအချက်သည်အသုံးပြုသူများသည် roller အသစ်များထက်ပြtoနာများပိုမိုကြုံတွေ့ရတတ်သည်ဟုမကြာခဏညည်းညူရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်ကြာပုံမှန်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ မျက်နှာပြင်နံရံသည်မှင်များ၊ ဆရာဝန်ဓါးများနှင့်ပန်းကန် roller များကြောင့်ထိခိုက်ပြီးနောက်ခက်ခဲသည့်အမှုန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထိခိုက်မခံပါ။
အကယ်၍ စက်သည်အချိန်တိုအတွင်းရပ်တန့်ပါက anilox roller သည်ဆက်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။ စက်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ထားသည့်အခါ anilox roller သည်ခြင်ဆေးခွေကိုအချိန်မီခွဲထုတ်ရန်၊ ရော်ဘာဖိအားပေးစက်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရေပေါ်မင်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အလျားလိုက် ဦး တည်ရာမညီမညာဖြစ်နေခြင်းသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းမှင်အခြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
anilox လိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အရည်အသွေးမြင့်ခြစ်ဆေးသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ခြစ်၏အစွန်းခိုင်မာသောသင့်လျော်သောဖြစ်သင့်သည်, ပိုမိုခက်ခဲသည်ပိုကောင်း။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၏အသွင်သဏ္appropriateာန်သည်သင့်လျော်ပြီးအစားထိုးမှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
သန့်ရှင်းသောမှင်သည် anilox roller ပေါ်တွင်ခြစ်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်အပြုသဘောဆောင်သည်။
anilox roller ၏ 5. မှင်တင်ထောက်လှမ်း
ကြွေထည်များသည်ကြမ်းတမ်းမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှုအချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်ဟောင်းနွမ်းသွားနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် anilox roller ၏မင်သယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်သည်အချိန်တိုးလာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်သင် anilox roller ကိုပိုမိုစံသတ်မှတ်ထားသောနှင့်ပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်လိုပါက anilox roller ၏အမှန်တကယ်မှင်စွမ်းရည်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်း၏အကြိမ်ရေသည်မကြာခဏမဖြစ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းအလုပ်ကို anilox လိပ်ပေးသွင်းသူအားအပ်နှင်းရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။
· anilox roller ကိုခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး၎င်းကိုစိုစွတ်သော၊ မိုးနှင့်နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
· anilox roller ကိုအစားထိုးသောအခါတိုက်မိပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် roller မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ပါ။ သိုလှောင်သည့်အခါကြိတ်စက်ကိုသဘာဝဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအထုပ်ကိုသုံးပါ။
·ရွေ့လျားသောအခါပွတ်တိုက်မှုနှင့်တိုက်မိပျက်စီးခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန် roller မျက်နှာပြင်အစား roller မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးတွင်ရိုးတံကိုဖြတ်သန်းသွားရန်လိုအပ်သည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးအုပ်ခြင်းတစ်ခုပြီးတိုင်း၊ ကြမ်းခင်း၏အောက်ခြေတွင်ကျန်ရှိနေသောအခြောက်များနှင့်ပိတ်ဆို့ထားမှုများကိုကျန်ရှိနေသေးသောမှင်သို့မဟုတ်အပေါ်ယံလွှာမှုတ်ဆေးများကိုရှောင်ရှားရန် roller ၏မျက်နှာပြင်ကိုအချိန်မီသန့်ရှင်းစေသင့်သည်။
·စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကွက်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုမကြာခဏသုံးပါ၊ ၀ တ်ဆင်မှုနှင့်ပိတ်ဆို့မှုများတွေ့ရှိပါကသက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
·လွှဲပြောင်းငွေပမာဏကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ခြစ်ခြစ်ခြင်းကိုအလွန်အမင်းဖိအားမပေးပါနှင့်၎င်းသည် anilox roller နှင့် scraper ၏ပွန်းပဲ့မှုကိုအလွယ်တကူပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
doctor ဆရာဝန်၏ဓါးကိုခြောက်သွေ့သော anilox လိပ်ကိုမလှည့်ပါနှင့်။
·အများဆုံးဝတ်ဆင်မှုထက်ကျော်လွန်သောခြစ်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းပါ။ နေ့စဉ်ခြုံငုံ။ ခြစ်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းကိုပုံမှန်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
·ခြစ်ခြစ်ကို roller နှင့်အမြဲတမ်းထားရှိပြီးပုံမှန်ချိန်ညှိပါ။
ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်မှုန့်များ (သို့) အဖုံးအုပ်ထားသောအလွှာသည်ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
01. Scratch လိုင်း
အကြောင်းပြချက်ဆန်းစစ်ချက် - ကြွေ anilox roller ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခြစ်ရာများအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာသေးငယ်သောခဲဖွယ်အမှုန်များသည်မင်ထဲတွင်ရောနှောနေသည်။ ဆရာဝန်ဓါးသည်မှင်ကိုခြစ်လိုက်သောအခါဆရာဝန်ဓါးနှင့်မင်ကြိတ်စက်ကြားရှိအမှုန်လေးများသည်ကြွေမျက်နှာပြင်ကိုခြစ်ရာ။ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်သောအမှုန်သေးသေးလေးများသည်ဆရာဝန်ဓါးသို့မဟုတ်မှင်စုပ်စက်၊ အစိုင်အခဲမှင်အမှုန်များ၊
၀ တ်ဆင်ထားသည့်သတ္တုအမှုန်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် filter supply တွင် filter နှင့် magnet block တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပါ
- မှင်ဓါးဆွဲထားသည့်အခန်းကိုသုံးသည့်အခါအခေါင်းပေါက်မှတဆင့်မှင်အလုံအလောက်ရှိသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ခြစ်ဆေးကိုအပြည့်အဝချောမွေ့စွာဖယ်ထုတ်ပြီး script အမှုန်များကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
02. ပုံမှန်မဟုတ်သော wear
· Squeegee ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပြီး squeegee ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီထားပါ
အကြောင်းပြချက်ဆန်းစစ်ချက် - anilox roller ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းသည်အချိန်နှင့်မပြည့်စုံပါ
·ပုံနှိပ်ပြီးနောက် anilox roller ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ
·စက်မှုတိုက်မှုမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားကိုအားဖြည့်ပါ
·စက်ပြင်ပသိုလှောင်သည့်အခါပုံစံ roller ၏အကာအကွယ်အဖုံးပေါ်တွင်တင်ပါ
·သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်ခြင်း၊ သင့်တော်သောသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ၊ နည်းလမ်း၏ကောင်းကျိုးများကိုအပြည့်အဝကစားပါ၊
အကြောင်းအရင်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ၎င်းသည် anilox roller ၏အောက်ခံပစ္စည်းများ၏ချေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ ၎င်းသည် anilox roller ၏မျက်နှာပြင်ကို ဦး ညွှတ်စေပြီးပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဒေသခံကြွေထည်မြေထည်များကိုပင်ကျစေနိုင်သည်။
·ကြွေ anilox roller များကိုမှာယူသောအခါ anilox roller ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖော်ပြပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအက်ဆစ်နှင့်ပြင်းထန်သောအယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါကထုတ်လုပ်သူသည်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
· Anilox roller ကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်အားကြီးသောအက်ဆစ်နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် alkali ဓာတုပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ
လက်ရှိ anilox လိပ်များကိုသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကိုအောက်ပါအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ အွန်လိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်သံမဏိဖြီးသို့မဟုတ် nano sponge ဖြင့်အထူး anilox roller သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိုသုံးပါ။
၂။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အထူးသန့်ရှင်းရေးကိရိယာနှင့်အတူ ultrasonic သန့်ရှင်းရေးစက်ကိုသုံးပါ။
·သံမဏိဖြီး၊ nano ရေမြှုပ်
အားသာချက်များ: အဆင်ပြေသန့်ရှင်းရေး, အဘယ်သူမျှမ disassembly နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, နှံ့နှံ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေး, အဘယ်သူမျှမပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တန်ဖိုးနည်း။
ဆိုးကျိုးများ - အထူး alkaline သန့်ရှင်းရေးအရည်အတွက်လိုအပ်သည်။ အချို့သောခေါင်းမာသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအတွက်မူအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့မကောင်းပါ။
ကောင်းကျိုးများ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာသန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း။
ဆိုးကျိုးများ - ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စျေးနှုန်းကမြင့်နေတယ်။ ကိစ္စများစွာတွင်အပူချိန်မြင့်သောရေသန့်ရှင်းရေးကိုမဖွင့်မီကြွေ anilox roller ကိုစိမ်ရန်အရည်ပျော်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ဆဲဖြစ်ပြီးသုံးစွဲရန်ကုန်ကျစရိတ်များရှိနေသေးသည်။
ကောင်းကျိုးများ - လက်ဖြင့်လည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ခေါင်းမာသောပိတ်ဆို့ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဆိုးကျိုးများ - ၁။ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်စျေးကြီးပြီးပစ္စည်းကိရိယာများအပြင်သန့်ရှင်းသောပျော်ရည်များကိုလည်းလိုအပ်သည်။
2. ultrasonic parameter သည်ထိန်းချုပ်မှုတိကျစွာလိုအပ်သည်, ထိုသို့တိကျစွာ anilox roller ၏ပိတ်ဆို့မှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်မှန်ကန်သောဆေးဝါးသတ်မှတ်, လိုအပ်သောမဟုတ်ရင်ကြောင့် anilox roller ပျက်စီးစေနိုင်သည်;
3. အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းလိုအပ်သည်။ မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည် ulilasonic သန့်ရှင်းခြင်းကို anilox roller သည်ကွက်နံရံကိုပျက်စီးစေပြီး anilox roller ၏သက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသည်။
ကောင်းကျိုးများ - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါ။ anilox roller ကိုမပျက်စီးစေဘဲ anilox roller ကိုမဖြည်ဘဲအွန်လိုင်းသန့်ရှင်းနိုင်သည်။
ဆိုးကျိုးများ - ဒီပစ္စည်းကအရမ်းစျေးကြီးတယ်။
သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအက်စစ်အက်စစ်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများနှင့်အခြားအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆတို့သည် anilox roller ကိုတုန်ခါစေသည့်အသေးစိတ်အချက်နှစ်ချက်ကိုသတိမမူမိကြပါ။ အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအက်ဆစ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်ကြွေထည်အလွှာအောက်ရှိအလွှာကိုပျက်စီးစေသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေသည်အက်စစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည့်အခါစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည့်အခါထုတ်လုပ်သူနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရမည်။ သို့မှသာသက်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်စိုထိုင်းဆများသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပတ်ဝန်းကျင်တွင်နှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းများစွာကိုအသုံးပြုသည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၌အတွေ့အကြုံများကသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် anilox လိပ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေငွေ့များအလွှာကိုအလွယ်တကူဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသိုလှောင်နေစဉ်အချိန်အတွင်းသုတ်လိမ်းပြီးခြောက်သွေ့ပြီးနောက်သိမ်းဆည်းထားရမည်။ သန့်စင်ထားသော anilox လိပ်ကိုလည်းသိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်သို့မဝင်မီအခြောက်လှန်းသင့်သည်။
အဝတ်အဘို့အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, အလိုအလျောက်အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating Machine, Pur Hot Melt ကော် Nonwoven Laminating စက်, ပူအရည်ပျော်ကော်လျှောက်ထား, Pur Hot အရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, Ce လက်မှတ်ပါသောရေပူကော် Laminating စက်,